मेरो संघर्षको कथा - kageshworikhabar.com
सिंहदरबार बस्नेहरुले स्वीजरल्यान्ड, सिङ्गापुर, नर्वे र जापान बनाउँछु भनेर सिरिया र हाइटीको जस्तो बन्दुक र बारुदको छर्का भोग्दै माल्दिभ्स र भुटान जस्तो पनि हुन नसकेको एक सुन्दर भविष्य भएको मेरो देश नेपालको एक गाउँ कुन्तादेबिको कुनामा जन्मिएको हुँ । आज जन्मिएको पनि २० बर्ष भन्दा अलि माथि नाघिसकेको रहेछ । सम्झिन्छु आज ती बाल्यकालमा गरेका गल्तिहरु अनि पछुताउँछु आफ्नै मनसँग । आज मलाई तीनै याद भएसम्मका यहासम्मका दिनहरुलाई सम्झिने जमर्को गरेको छु ।
वि. सं २०६० साल बैशाख १६ गते म पहिलोपटक बिद्यालयमा पढ्न गएको थिएँ रे । क,ख र A,B,C,D लेख्न प्रयास गर्दाको संघर्ष र अहिलेको संघर्षमा फरक रहेछ । त्यो बेला नजान्दा सिक्ने अवसर मिल्थ्यो तर अहिले निराश भएर हिड्नु बाहेेक केही छैन । २०७० सालमा श्री सरस्वति मा.बि. बुङ्नाम र मेरो अथक प्रयासबाट मलाई SLC प्रथम डिभिजनको सर्टिफिकेट र बिद्यालयले आफ्नो अभिलेखमा एक बिद्यार्थी थपेको गर्व गर्दै थियो । बिद्यालयका १० बर्षे दिनहरुले आज संघर्षमा बाच्ने आधार सिकाएको छ , हरेक कठिन परिस्थितिहरु जुध्न सिकाएको छ ।
कक्षा १० उत्तिण पश्चात् अलमलिएको थिएँ म , उच्च शिक्षा अध्ययन कहाँ ,कुन, कसरी गर्ने भनेर । मेरो रहर र चाहना इन्जिनियर पढ्ने थियो तर परिवारको अवस्था र केहि अन्य कारणले गर्दा इन्जिनियर पढ्ने इच्छाहरु मनमा नै थन्काउन बाध्य थिएँ म । बिकल्प पढ्ने र कम खर्चिलो अब मलाई लोकसेवा भयो । श्री बरुणेश्वर उच्च मा वि मा कक्षा ११ मा भर्ना हुँदै उच्च शिक्षा र लोकसेवाको अध्ययन थालेको म २०७२ मा १२ कक्षा सकेर स्नातक अध्ययन सुरु गरेको छु ।
हरेक समय र अन्तराललाई पार गर्दै २०७६ पुस १९ गते तेस्रो प्रयासमा लोकसेवामा नाम अन्तिम अन्तिम तिर नाम अटाउन सफल भएँ । मेरो चाहाना पूरा भएको थियो सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने । रोलक्रम ३३ औँ नम्बरमा सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुुलुङ गाउँपालिकामा प्रशासन तर्फ नाम निस्कन पुगेको रहेछ । सबैमा खुसी छाएको थियो । घरपरिवार, साथिभाई , इस्टमित्र, अग्रज ब्यक्तित्वहरु सम्पुर्णको माया, ममता, साथ र सहयोग र प्रेरणााले यहाँसम्मको यात्रा तय गरेको छु सबै मेरा धन्यबादका पात्र नभइरहन सक्दैनन । आज सरकारी सेवाको एकबर्ष र जन्मदिनको २२ बर्ष केही फरक भएको त पक्कै छ ।
इन्जिनियर भएर घर, भबन र पुलहरुका लम्बाई , चौडाइ , उचाई र अायतन नाप्ने अवसर त पूरा भएन, तर गुनासो छैन अब किनकी हरेक मान्छेहरुका मन र बिचारको लम्बाई अनि सोच र आटँको क्षमता र आयतन नाप्ने अवसर मिलेको छ । हो मलाई यहाँसम्म ल्याउन हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने ब्यक्तिहरुको ऋणी छु म त्यो गुन र ऋण अवश्व फिर्ता गर्नेछु ।
जिन्दगिमा जति प्रयास गरेको छु त्यो प्रयास अझै गरिरहने छु । सरकारी सेवामा रहेर देश र जनताको सेवामा खटिरहन पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेको छु । धेरै ठूलो लक्ष्य र उदेश्य त छैन तर पनि आफु जे जसरी बाँचेको छु त्यसरी नै बाच्न पाउँ।।
मनमा खुसी र रहरका थुप्राहरुलाई दबाउँदै कहर र बाध्यताका पहाडहरुलाई अगाडि ल्याएर सबैलाई खुसी राख्न सकुँ काहीँ भगवान छन भने यहि मागसहितको निवेदन गर्दछु ।
बर्खाबेलामा आउने खहरेको जस्तो भेल हुनु छैन मलाई सदाबहार बग्ने निलो देखिने प्रशान्त र हिन्द महासागर जस्तो बन्नुछ । रहरहरु नाइल जस्तै लामा छन् अनि इच्छा,सोच र आँटहरु पनि नाइल जस्तै लामा र अमेजन जस्तै फराकिला छन् । आज जन्मदिन संसारमा हरेक समस्याहरुसँग जुध्न अनि तपाईहरुका चाहनाहरु पूरा गर्न तल्लीन छु , तपाईहरुको मनमा हाँसो र खुसी ल्याउन प्रयासरत छु आमा -बुबा ।
धन्यवाद आमा अनि बुबा जन्मदिनु भएकोमा ।।।
जीवन संघर्ष हो संघर्षमै बितोस्।
Previous article३१ लाखको अवैधऔषधिसहित ८ जना पक्राउ
Next articleमंगलबारबाट क्लिनफिडले बन्द टेलिभिजन च्यानल पुनः सञ्चालन